विद्युत् प्राधिकरणको सबस्टेशनमा आगलागी -बिगुल न्यूज
कार्तिक १०, २०७६ NK-Bigul Media
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सिन्धुपाल्चोक वितरण केन्द्रको सबस्टेशनमा आगलागी भएको छ । आइतबार मध्याह्न सबस्टेशनको ट्रान्सफर्मर अचानक पड्किएर आगलागी हुँदा ३० एमभिए क्षमताको ट्रान्सफर्मर पूर्णरुपमा जलेको छ ।
अचानक ट्रान्सफर्म ठूलो आवाजका साथ पड्किएको र त्यसपछि सबस्टेशनमा आगोको मुस्लो उठेको सबस्टेशनका कर्मचारी फुर्पासाङ्गे लामाले जानकारी दिनुभयो । “अचानक ठूलो आवाजका साथ पड्कियो, त्यसपछि त राँको उठिहाल्यो”, उहाँले भन्नुभयो, “एक¬–दुई जनाले तत्काल निभाउन सक्ने अवस्था नै भएन ।”
आगलागीपछि नेपाली सेनाको विद्युत् प्राधिकरण सुरक्षा गुल्म, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी, प्राधिकरणका कर्मचारी र स्थानीय अगुवाहरु आगो नियन्त्रणमा खटिएपछि झण्डै डेढ घण्टामा आगो नियन्त्रणमा आयो । आगलागीपछि नेपाली सेना तत्काल नियन्त्रणमा खटिएको नेपाली सेनाका प्राधिकरण सुरक्षा गुल्मका क्याप्टेन प्रल्हाद केसीले बताए ।”
प्राधिकरणका अनुसार जलेको ट्रान्सफर्मर मर्मत हुने÷नहुने यकिन छैन । केबुल र क्वाइनहरु नै जलेका छन्, ३० एमभिए क्षमताको यो ट्रान्सफर्मर पूर्णरुपमा क्षति भएको अनुमान छ । “यो ट्रान्सफर्मरको मूल्य तीन करोडभन्दा बढी पर्दछ, मर्मत हुन सकेन भने तीन करोड त उसै क्षति भइहाल्यो”, सिन्धुपाल्चोक वितरण केन्द्रका इलेक्ट्रिक इन्जिनीयर राजन भण्डारीले भन्नुभयो ।
प्रकाशित : आइतबार, कार्तिक १०, २०७६१९:५८
बरु ज्यान जाला तर, महिलाले कहिल्लै भन्दैनन् आफ्ना यी रहस्य…
दाम्पत्य जिवनमा बिग्रेला भनेर चिन्तित हुनुहुन्छ ? यसरी हुन सक्छ बैवाहिक जिवन सुखी !
‘चिहानको हड्डी फुकेर कुनै संस्था फर्किन्न। बेमौसमको यो बाजा नबजाए हुन्थ्यो ।’ : प्रम ओली
नेताको भाषा र भावनामा कहिले मिल्ला तालमेल ?
यस्ता छन् कागती सेवन गर्नुका आश्चर्यचकित पार्ने फाईदै-फाईदा…
मदन पुरस्कार’ कँडेल र ‘जगदम्बाश्री’ वात्सायनलाई